I-CR7 izakuvula iihotele ezintsha eMarrakech, eMadrid naseNew York | Iindaba Zokuhamba
Ukuba kukho umdlalo ophakanyiselwe kudidi lweziganeko zehlabathi nezigidi zabalandeli kwihlabathi liphela, yibhola ekhatywayo. Iiklabhu kunye nabadlali bebhola ekhatywayo bavusa inkanuko enjalo kangangokuba ayimangalisi into yokuba iihotele ezinomxholo zizinikele kukumkani wezemidlalo.
Ewe, okwethutyana ngoku yenye yeenkwenkwezi zebhola yaseYurophu, UCristiano Ronaldo, ujoyine lo mkhwa kwaye uvule iihotele ezininzi ezinemidlalo, impilo esempilweni kunye nenombolo yakhe njengomxholo ophambili.
ILisbon, iFunchal, iMadrid, iNew York kwaye ngoku iMarrakech ijoyina uluhlu lwezixeko ezenzelwe ihotele iCR7. Zinjani nganye kuzo?
6 Zinjani iihotele zeCR7?
Ulwakhiwo lwehotele yesihlanu kaCristiano Ronaldo sele luqhubeka kwaye ukumiselwa kwayo kucwangciselwe i-2019 phantsi kwegama lePestana CR7 Marrakech. Iya kulandela umgaqo omnye njengazo zonke iihotele zayo kodwa ngohlobo lweMoroccan kuba uthando lomdlali webhola ekhatywayo kwilizwe laseAfrika laziwa kakuhle.
IPestana CR7 Marrakech izakubekwa kwi-avenue M yesixeko, kwenye yezona ndawo zikhethekileyo zijikelezwe ziigalari zobugcisa, iivenkile ezitofotofo, iivenkile zokutyela ezihamba phambili kunye neegadi ezintle.
Ihotele ebenomdlali webhola ekhatywayo emcimbini weMadrid iya kuthi ivule iingcango zalo nyaka kwaye izakufakwa kwi-Plaza Sodolophu. Ixabiso eliqhelekileyo liya kuba malunga nama-euro angama-200 ngobusuku bonke kwaye iya kuba namagumbi angama-87, nalapho i-12 iya kuba zii-suites.
Njengomdla, umbono yayikukuba ihotele yokuqala yeCR7 ivulwe eMadrid, kodwa ngenxa yobunzima obuthile basezidolophini kunye nokulibaziseka kwezomthetho, ukuvulwa kwesiseko kwikomkhulu laseSpain kuye kwafuneka kumiswe elinye ixesha.
I-Pestana CR2018 New York kunye ne-Pestana NY East Side kunye ne-Pestana Newark zicwangciselwe ukuvula e-United States ngo-7., eziza kongeza ngaphezulu kwamagumbi amatsha angama-380 kweli lizwe.
Zombini ezo eUnited States naseMadrid ziya kuba ziihotele eziphantsi kophawu loQokelelo, ezijolise kubaphulaphuli abakhethekileyo abanesimbo sangoku nesedolophini.
Nge-Pestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels kunye nezinye iiprojekthi zokwamkela iindwendwe sifuna ukubuyisa iBaixa kububi bayo kwaye siyiphinde izalwe.
Ihotele ye-boutique enamagumbi angama-80 kunye nesuti ye-deluxe entliziyweni yesixeko, iimitha ezimbalwa ukusuka kumfuziselo wePraça do Comércio. Ukuhonjiswa kwamagumbi kuyasebenza kwaye kuncinci kodwa izingqinisiso zemidlalo ziyaqhubeka. Ayisiyiyo kuphela indawo kaCristiano Ronaldo okhoyo kuyo yonke indawo kodwa nangokubakho kwemifanekiso yeediliya ubuntshatsheli kulwamkelo ehotele, ibhola etafileni kwindawo yokulinda okanye izikrini ezinkulu ebharini ukuze ungaphoswa ngumdlalo.
Ukongeza, i-Pestana CR7 Lisboa Lifestyle Hotels ine-automation system evumela ukulawula ukukhanya okanye ubushushu begumbi kuso nasiphi na isixhobo sedijithali, khetha umculo okanye utshintshe inkqubo kamabonakude.
Kwaye ehotele ekhuthaza impilo esempilweni, awungekhe uphoswe yindawo yokuzivocavoca apho abathengi banokuzilolonga khona kunye nokuphucula imeko yabo yomzimba. Enkosi kwinkangeleko ebhalwe nguwe yehotele eneenkqubo ezifanelekileyo zomntu ngamnye.
Igama layo yiPestana CR7 Funchal kwaye ikwikomkhulu laseMadeira kwisakhiwo esibomvu esibomvu esijonge elwandle esinephuli yokudada, i-spa, ukufikelela simahla kwiMyuziyam ye-CR7 eFunchal kunye nokwenzeka kokusebenzisa inkqubo yoqeqesho ekhethekileyo kwindawo yayo yokuzivocavoca yangaphandle eyilwe ngumdlali webhola ngokwakhe.
Ngaphakathi kwiPestana CR7 Funchal kukho iindidi ezintathu zamagumbi adibanisa uyilo lwangoku kunye nolwezemidlalo. Banazo zonke iindidi zobutofotofo, banqatyisiwe isandi kwaye bafikeleleka ngokwamanani ngokusebenzisa ipaseji yengca eyenziweyo ekhumbuza ibala lebala lebhola. Kumnyango ngamnye kukho ifoto enkulu kaRonaldo kwaye kumagumbi okulala kukho imizobo yobomi bakhe.
Ukongeza, iindwendwe zikwanokufikelela kumhlaba ophezu kophahla lwehotele, onika umbono omangalisayo weFunchal, bay yayo kunye nolwandle.
Zinjani iihotele zeCR7?
Iihotele zeCR7 ziziphumo zomanyano phakathi kwenkwenkwezi yasePortugal kunye nePestana Hotels & Resorts Group, ejongene nolawulo lokusebenza kweepropathi. Iprofayili yomthengi yeehotele zikaCristiano Ronaldo ngabantu abancinci abaphakathi kweminyaka eli-18 nengama-35 abanomdla kwitekhnoloji, impilo esempilweni kunye nobomi bentlalo.
Amaxabiso aqala phakathi kwama-250 ukuya kuma-1.250 euros ubusuku ngabunye kuxhomekeke kwigumbi. Banokubonakala njengamaxabiso aphezulu, kodwa ezi ziihotele ezinenkwenkwezi ezi-5 ezixhotyiswe ngazo zonke iintlobo zobutofotofo kunye netekhnoloji yakutshanje. Nangona kunjalo, kukho abo bathandabuzayo ukuba baninzi abantu abancinci abanokukwazi ukufikelela kula maxabiso xa bekhetha ukukhetha ukhenketho lwexabiso eliphantsi.
Nangona kunjalo, uphawu luceba ukuliphinda kabini inani leehotele kwiminyaka emihlanu. Ukuvulwa okulandelayo kunamahemuhemu okuba eMilan naseIbiza kunye naseAsia nakuMbindi Mpuma kuba uCristiano Ronaldo uthandwa kakhulu apho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Indawo yokuhlala » I-CR7 izakuvula iihotele ezintsha eMarrakech, eMadrid naseNew York
I-Caral, ukhenketho lwezinto zakudala ePeru